युट्युबेका खेतीपाती !
अविरल थापा, आश्विन १, २०७६
युट्युबको प्रयोग कसले कुन प्रयोजनका लागि गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । ज्ञानगुनका कुरा पनि यसैमा छन्, गीत–संगीत, चलचित्र पनि यसैमा छन्, भजन पनि यसैमा छन्, यौनका कुरा पनि यसैमा छन् । के हेर्ने र के नहेर्ने मानिसको उमेर र रुचिअनुसारको रोजाइ हो । बोली फुटेका बच्चादेखि लिएर कपाल फुलेका वृद्धसम्म यसैमा भुलेका देखिन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, भाद्र ५, २०७६
आधुनिकता भनेको सोच हो, पहिरन होइन । लुगा फुकाल्दैमा र जुल्फी पाल्दैमा मोडल भइँदैन । मकै–भटमास र ढिँडो खाँदैमा पाखे भइँदैन । लोकदोहरी गाउँदैमा गाउँले र डिस्को जाँदैमा सहरिया भइँदैन । अरूको पनि चाखौं, तर आफ्नोलाई रछ्यानमा नफालौं । शरीरमा मात्र होइन, सोच र व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याऊँ । अरूको देखासिकी गर्दागर्दै ऐनामा आफ्नै अनुहार नचिनिएला, बेलैमा होस गरौं । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, श्रावण ८, २०७६
कुनै दिन तिमीबिना बाँच्न सक्दिन भनेको मान्छे अचानक अब म तिमीसँग बाँच्न सक्दिनँ भन्ने मोडमा कसरी पुग्छ ? झट्ट हेर्दा एकैदिनमा एकैछिनमा सम्बन्ध बिग्रियो, सक्कियो भनेजस्तो लाग्छ तर निर्णायक मोडमा आउनुअघि अनेकन् घटना घटिसकेका हुन्छन् । अरूले हेर्दा केही नदेखिए पनि दुई जनाको हृदयमा अनेकचोटि बाढी–पहिरो गैसकेको हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्